ukuphila kwamasondo amabili
I-Encyclopedia yokuthutha enamasondo amabili
Indlela yokuthuthukisa i-cadence ngebhayisikili?
Isigaba: Iwusizo 0
Ungayithola kanjani i-cadence ye-pedaling enhle? Okutuswa kakhulu ukuze kuzuzwe i-cadence esebenza kahle ukuhlala phakathi kwama-revolution angu-80 no-100 ngomzuzu. Khumbula ukuthi…
Ubuzile: Ungasikhetha kanjani isihlalo sebhayisikili esinethezekile?
Ungakhetha kanjani isihlalo sebhayisikili? Linganisa ububanzi bamathambo akho okuhlala Kodwa khumbula ukuthi izihlalo zezihlalo zitholakala ngobubanzi obuhlukahlukene. Ububanzi besihlalo sehhashi buzoncika ku...
Ubuzile: Usenza kanjani isihlalo sakho sebhayisikili singalimali?
Yibuphi ubude obufanele besihlalo sebhayisikili? Phindaphinda lelo banga ngo-0,88: njengoba ngokocwaningo lwe-biomechanical ubude obufanele behhashi yi...
Impendulo esheshayo: Ithini i-moto Z yakamuva?
I-MOTO Z4 6,4-intshi ye-OLED DISPLAY (19:9) I-HD+ egcwele ukulungiswa (2.340 x 1.080 pixels) PROCESSOR I-Qualcomm Snapdragon 675 RAM 4 GB ISITOREJI 128 GB + microSD kufika ku-2…
Asetshenziswa kanjani amandla okuhamba ngebhayisikili ukuhambisa ibhayisikili?
Impendulo: Incazelo: kukhona ukuthambekela kokunyathela ngendlela yepiston, okungukuthi, "ukunyathela" ku-pedal kusuka phezulu kuya phansi futhi ngaleyo ndlela ukushintshanisa imilenze. Okulungile yi…
Ubiza malini umshwalense wokuqala wesithuthuthu?
Imuphi umshwalense wezithuthuthu oshibhe kakhulu wabantu abasha? Njengakwamanye amaphrofayili, umshwalense wezithuthuthu oshibhe kakhulu yilowo ohlinzekwa ngu…
Mangaki amahora aziqeqesha umgibeli wamabhayisikili ngeviki?
Mangaki amahora aziqeqesha umgibeli wamabhayisikili ochwepheshe ngeviki? Amahora angu-6-8 ngesonto anganele! Kunenkolelo evamile yokuthi ukuba nezinga elihle...
Yini ongayithola ngesidlo sasekuseni somjaho wamabhayisikili?
Yini okufanele uyidle ngesikhathi sokuhlolwa kwebhayisikili? Emjahweni Uma sesihamba ngebhayisikili, kuyancomeka ukuthi sidle ukudla okulula njalo ngemizuzu engama-45 noma ihora ngalinye….
Impendulo esheshayo: Ilayisensi yenhlangano yamabhayisikili ihlala isikhathi esingakanani?
Ibiza malini ilayisense yenhlangano yamabhayisikili? Ilayisense yenhlangano eSpain cishe i-€120-130 ngonyaka futhi ikuvumela ukuthi ube yingxenye yaleli qembu futhi ikunikeza…
Hlobo luni lwamafutha olusetshenziswa izigxobo zesithuthuthu?
Imaphi amafutha asetshenziswa izigxobo zesithuthuthu? Ngingasebenzisa i-SAE W10 noma i-80 noma 90W yokudlulisela noma uwoyela we-20W 40 odonsa ukushaqeka ngaphakathi...
1 2 ... 470 Olandelayo
Sawubona. Igama lami nginguMichael. Ama-Mopeds, izithuthuthu, amabhayisikili, kunjalo, ahlangene futhi angakwazi ukuqondiswa. Kodwa lokhu akuyona nje induduzo yalokhu kuthutha, futhi kubhulogi yami ngizokutshela konke mayelana nalolu hlobo lwezokuthutha.
Ungabala kanjani ukuphakama kwesibambo se-MTB?
Iyiphi ibhayisikili lezemidlalo engiyithengayo ukuze ngiyiqale?
Impendulo esheshayo: Yiziphi zonke izingxenye zebhayisikili?
Ubani owadala isithuthuthu sokuqala?
Impendulo engcono kakhulu: Imuphi umdlalo ongcono ukugijima noma wamabhayisikili?
Yini okufanele uyenze lapho ibhayisikili liba manzi?
Impendulo Esheshayo: Lenziwa nini ibhayisikili lokuqala?
Oxhumana nabo | Mayelana NATHI | Inqubomgomo Yobumfihlo Nekhukhi
ABAPHATHI BAMALUNGELO OKUNAKELA! Zonke izinto ezifakwe esizeni zenzelwe izinjongo zokwazisa nokufundisa kuphela! Uma ukholwa ukuthi ukuthunyelwa kwanoma yikuphi okubalulekile kwephula i-copyright yakho, sicela uqiniseke ukuthi usithinta usebenzisa ifomu lokuxhumana futhi impahla yakho izosuswa.